Tilmaanta wanaagsanaanta | Adeegyada Taageerada Ardayda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Helitaanka taageerada iyo hagida cunuggaaga meel kasta oo ay quseyso, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo macallinka fasalkaaga iyo / ama maamulka dhismahaaga heerka dugsiga hoose iyo la-taliyaha dugsigaaga heerka dugsiga sare. Waxay halkaa u joogaan inay hagaan oo ay u fududeeyaan isku xirka taageerada. Ka sokow macalinka fasalkaaga iyo maamulkaaga, waxaa jira shaqaale badan oo xirfad sare leh una tababaran Taageerada Ardayga kuwaasoo kaa caawin kara inaad marin u hesho nidaamyada taageerada oo kaala shaqeeya sidii loo hubin lahaa inaan wax ka qabanno oo aan ula kulanno baahiyaha wanaagsan ee cunuggaaga. Shaqaalahan ayaa sida caadiga ah xaadira kulamada Kooxda Taageerada Ardayda (SST) ee dugsi kasta.
Shaqaalaha taageerada degmada waxaa ka mid ah:
Shaqaalaha Bulshada iskuulka
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
Istaraatiijiyadda Bulsho, shucuureed & Dabeecad
Fududeeyaha Adeegyada Taageerada Ardayga
Adeegyada Iskaashatada Caafimaadka Maskaxda
Kooxda Adeegyada Caafimaadku waxay iska kaashadaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ka dhexeysa dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga ee guusha ardayga. Kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh (LSN) iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jirka, bulshada, iyo shucuurta ardayda, marka lagu daro kor u qaadista caafimaadka iyo amniga bulshada iskuulka oo dhan. Xafiisyadayada caafimaad ee iskuulka waxaa shaqaalaysiiya arday kasta maalin kasta shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal ah oo kalkaaliye caafimaad oo shati leh lehna xagga dhismaha ama ku soo wicitaanka degmada dhexdeeda.
Kalkaalisada shatiyeysan ee shatiga leh ee leh xirfadlaha caafimaadka ayaa dhiirrigelisa oo ilaalisa caafimaadka iyo fayoobaanta ardayda oo dhan. LSN waa kalkaaliyayaal caafimaad oo ka diiwaangashan BSN waxayna shati ka haystaan caafimaadka dadweynaha iyo kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka. Kalkaalisadu waxay u gudbin doontaa agabyada bulshada sida loogu baahan yahay iyadoo la kaashanaysa waalidiinta. Xirfadlayaasha Caafimaadka waxay siiyaan daryeel caafimaad deg deg ah iyo gargaarka degdegga ah ardayda iyo shaqaalaha qaba xanuunada iyo dhaawacyada. Waxay daryeel siiyaan ardayda qaba xaalado caafimaad oo daba dheeraaday sida ay u igmatay LSN. Ka eeg bogga Adeegyada Caafimaadka ilaha iyo foomamka badan.
Dugsi Magaca Telefoon
La-taliyayaasha dugsiga waxay ku yeeshaan saameyn la qiyaasi karo ee ku saabsan nolosha arday kasta, iyagoo ka caawinaya tacliinta, shaqada iyo horumarka shaqsiyeed / bulsheed. La-taliye dugsi ayaa xubin ka ah kooxda waxbarashada, waana qof siiya kaalmo qiimo leh ardayda, kana caawinaya himilooyinkooda waxbarasho, horumarkooda bulsheed iyo shaqsiyadeed, iyo horumarkooda shaqo. Adeegsiga hoggaanka, u doodista, iyo iskaashiga, la-taliyayaasha dugsiga waxay sare u qaadaan guusha ardayga, bixiyaan adeegyo ka-hortag ah, iyo wax ka qabashada baahiyaha ardayda ee la aqoonsaday iyagoo fulinaya barnaamij latalin dugsi oo dhameystiran.
La-taliyayaasha dugsiga mihnadlaha ah ayaa loo tababbaray waxbaridda iyo la-talinta labadaba, iyagoo u oggolaanaya inay u shaqeeyaan fududeeye u dhexeeya waalidiinta, macallimiinta iyo ardayga arrimaha ku saabsan himilooyinka ardayga, kartida iyo aag kasta oo u baahan horumar. La-taliyayaasha dugsiga waxay bixiyaan adeegyo keliya maahan ardayda baahan, laakiin dhammaan ardayda. La-taliyayaasha dugsiga waxay waqtigooda inta ugu badan ku qaataan si toos ah adeegga tooska ah ee ay ula xiriiraan ardayda. Waajibaadka lataliyeyaasha iskuulka waxaa diiradda lagu saarayaa gaarsiinta guud ee barnaamijka guud ee loo maro manhajka la talinta ee dugsiga, qorsheynta shaqsiga ardayga iyo adeegyada jawaabta.
Iskuulada Dadweynaha Minnetonka, doorka lataliyaha iskuulka waa inuu noqdaa qofka ugu horeeya ee taageerada waalidiinta iyo macalinku ay raadiyaan inay caawiyaan ardayda. Gaar ahaan, marka la joogo heerka dugsiga sare la-taliyaha wuxuu isku dubaridaa macluumaadka guud ahaan meelihiina wuu fududeynayaa hanaanka si loo hubiyo guusha ardayga.
Amy Horning (Shaqaalaha Bulshada)
Donna Dahl (Shaqaalaha Bulshada)
Shaqaalaha arrimaha bulshada ee iskuulka waa iskuxir muhiim ah oo ka dhexeeya dugsiga, guriga, iyo bulshada ee ka caawinta ardayda inay ku guuleystaan waxbarashadda. Waxay si toos ah ula shaqeeyaan maamulka iskuulka iyo dhismaha Kooxda Taageerada Ardayda, iyo sidoo kale ardayda iyo qoysaska, iyagoo siinaya hogaaminta qiimeynta wanaaga, maaraynta dhibaatooyinka, iyo adeegyada taageerada. Shaqaalaha bulshada ayaa u dhaqma sidii qayb ka mid ah kooxda isku xirka si ardayda looga caawiyo inay guuleystaan. Shaqaalaha bulshada ee iskuulka ayaa sidoo kale fududeeya gudbinta bulshada iyo ka qeybgalka dugsiyada iyagoo u doodaya guusha ardayga.
Shaqaalaha bulshada ee Iskuullada Minnetonka waxay siiyaan taageero toos ah iyo mid aan toos ahayn ardayda leh baahiyo qaas ah xagga la dhaqanka bulshada, shucuurta iyo waxqabadka. Badanaa shaqaalaha bulshada ee iskuulka ayaa noqon kara xiriiriye koowaad marka la soo aruurinayo taariikh caafimaad iyo mid waxbarasho marka ardayga loo diro qiimeynta waxbarashada gaarka ah. Shaqaalaha bulshada ee iskuulka ayaa bixiya caddayn ku saleysan taageero waxbarasho, adeegyo faragelin; shaqsiyaadka iyo kooxaha yar-yar, waxayna kobciyaan jawiga iskuulka waxayna yareysaa isku xirnaanta ardayda, qoysaska iyo ilaha bulshada.
Cilmu-nafsi yaqaanka iskuulka ayaa ka caawiya carruurta iyo dhalinyarada inay ku guuleystaan tacliin ahaan, bulsho ahaan, dhaqan ahaan, iyo shucuur ahaan. Waxay iskaashi la leeyihiin barayaasha, waalidiinta, iyo xirfadleyda kale si loo abuuro nabadgelyo, caafimaad, iyo bey'ad waxbarasho oo taageero leh oo xoojineysa isku xirnaanta u dhexeeya guriga, dugsiga, iyo bulshada. Dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee iskuulka ayaa si aad ah loogu tababaray cilmu-nafsiga iyo waxbarashada, iyagoo dhameystiraya ugu yaraan barnaamijka heerka-takhasuska gaarka ah. Tababarkani wuxuu xooga saarayaa diyaarinta caafimaadka maskaxda iyo wax ka qabashada waxbarashada, horumarka ilmaha, barashada, dhaqanka, dhiirigalinta, manhajka iyo tilmaanta, qiimaynta, la tashiga, wada shaqeynta, sharciga iskuulka, iyo nidaamyada. Dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee iskuulka waa in ay sharciyeeyaan oo / ama shatiyeeyaan gobolka ay ku shaqeeyaan. Waxaa kale oo lagayaabaa inay qaran ahaan kaqeeyaan shahaadada iskuulka ee shahaadada cilmi nafsiga ee iskuulka (NSPCB).
Iskuulada Dadweynaha Minnetonka, doorka cilmi-nafsi yaqaanka iskoolka ayaa inta badan heegan u ah geedi socodka qiimeynta iyo dib u qiimeynta ardayda adeegyada waxbarashada gaarka ah. Khabiir cilmi-nafsi kastaa waa qayb ka mid ah Kooxda Taageerada Ardayga ee dugsiga oo kormeeraya tixraaca iyo habka wax ka-qabashada. Hawshan, xogta waa la falanqeeyay fikradaha wax ka qabadka ayaa la sameeyay lana kormeerayaa. Haddii loo baahan yahay qiimeyn waxbarasho gaar ah, doorka cilmi-nafsi yaqaanka ayaa ah kan soosocda: maamula, qiimeeya oo tarjun natiijooyinka qalabka qiimaynta shaqsiyeed / nidaamyo cabbiraya awooda barashada / qiimeynta garashada iyo bulshada, shucuurta, iyo dabeecadda.
Nadiifi Biyo Talia Lehmann
Istaraatijiyada degmadu waxay taageertaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska caruurnimada hore ilaa fasalka 12 oo waxay siisaa taageero cadeynaya iyo hirgelinta tabaha iyo dhaqamada ugu wanaagsan ee ardayda la halgama arrimaha bulshada, shucuurta, dhaqanka, isgaarsiinta, iyo / ama baahiyaha waxbarasho. Istaraatiijiyada degmadu waxay lashaqeysaa shaqaalaha si ay ula jaan qaadaan istiraatiijiyadaha guud iyo dejinta waxbarashada gaarka ah. Marka lagu daro bixinta macluumaadka ku saabsan waxqabadka ugu wanaagsan, istaraatiijiyadda degmadu waxay siisaa tababar shaqaalaha, barida tusaalaha, iyo taageerada manhajka iyo horumarinta barnaamijka. Istaraatiijiyaddu waxay lashaqaysaa kooxaha si ay u meelmariyaan barnaamijyo dabeecadeed oo u oggolaanaya ardayda inay marin u helaan waxbarashadooda deegaanka ugu xakamaynta yar. Waxay u horseedaan horumarin xirfadeed dhammaan macallimiinta waxbarashada gaarka ah iyo kuwa guudba iyo shaqaalaha kaalmada ee degmada oo dhan.
Fududeeyeyaasha Adeegyada Taageerada Ardaydu waxay bixiyaan hoggaan dhisidda waaxyo waxbarasho oo gaar ah. Fududeeyeyaashu waa macallimiin aqoon gaar ah u leh shatiga. Fududeeyeyaasha ayaa isku dubbaridaya oo kormeeraya nidaamka degmo dugsiyeedka loogu talagalay gudbinta oo ay ku jiraan Kooxda Daraasaadka Caruurta, qiimeynta iyo ikhtiyaarada adeegga ee ardayda buuxisa shuruudaha waxbarashada gaarka ah. Ka sokow la socoshada Kooxda Daraasadda Caruurta, fudeydiyayaashu way ka qayb galaan oo waxay ka qaybgalaan Kooxaha Taageerada Ardayda. Fududeeyeyaasha ayaa maamusha, qiimeeya oo tarjuma natiijooyinka qalabyada / qiimeynta shaqsiyadeed ee cabbira guulaha tacliimeed iyo bulsheed, shucuureed, iyo dabeecadda. Fududeeyeyaashu waxay xaqiijinayaan heerka dhismaha nidaamka u hoggaansanaanta nidaamka dhismahooda.
Kooxda isku dubarida adeegyada ardayda ee la tashiga shaqaalaha la talinta si ay u abuuraan jadwal ardayda imanaya ee hela adeegyada waxbarashada gaarka ah. Ka sokow la shaqeynta lataliyayaasha iskuulka, fududeeyeyaasha ayaa ka shaqeeya xalinta walaacyada barnaamijyada ee ardayda waxbarashada gaarka ah.
Dhisme kastaa wuxuu leeyahay Iskuduwaha 504 qofkani shaqaalayana wuxuu si dhow ula shaqeeyaa Kooxda Taageerada Ardayda (SST). Qaybta 504 waa sharci federaal ah oo ilaalinaya xuquuqda shakhsiyaadka itaalka darran. 504 waxay u baahan tahay in dadka qaata lacagaha federaalka ah ay barnaamijyadooda iyo nashaadaaddooda u sahlaan dhammaan dadka naafada ah ee carqaladeeya howlaha waaweyn ee nolosha sida: daryeelka qofka naftiisa, qabashada howlaha buugga, socodka, aragga, maqalka, cunnada, hurdada, socodka, istaagga, kor u qaadida, foorarsiga, hadalka, neefsashada, barashada, aqrinta, is-fiirsashada, fikirka, isgaarsiinta iyo shaqada. Haddii uu jiro naafonimo u qalma ubadku u baahan yahay meelayn, waxaan eegi doonnaa macluumaadka cunuggaaga oo aan horumarin doonnaa oo hirgelin doonnaa qorshe hoy. Baro inbadan oo ku saabsan adeegyada 504 .
F arrah Jennings
Iskuullada degmada ee Minnetonka waxay sidoo kale lashaqeeyaan wakaaladaha bulshada si ay u bixiyaan khuburo ku xeel dheer caafimaadka maskaxda iyo adeegyo ka dhex jira dugsiga. Taageeradan waxaa loo adeegsaday gudbinta iyadoo loo marayo adeegaha bulshada ee iskuulka Minnetonka ama lataliyaha iskuulka ee dhismahooda ardayda u baahan caawinaad dheeri ah oo laga yaabo inay carqalado ka geystaan helitaanka taageeradan ka baxsan nidaamka iskuulka.
Hoyga Kheyraadka Nolol-wanaag
Taageerooyinka Dheeraadka ah ee Degmooyinka
Soo degso Buugga Tilmaamaha-wanaagga (pdf)
Caafimaadka Dijitaalka iyo Fayodhawrka
Warbixinta Saamaynta 2018
Soo bandhigida Minnetonka TA
Liiska Masterka Kheyraadka Dhibaatada Ardayga
Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Iskuulka
Liiska Masterka Kheyraadka Dhallinta iyo Dhallinyarda
Natiijooyinka Sahanka Ardayga
Sahanka Ardayda Minnesota: 2019 Minnetonka Xogta
Sahanka Ardayda Minnesota: Xogta Gobolka ee 2019
Qiimaynta Adeegyada Caafimaadka / Maskaxda ee Ardayga
Qiimeynta fayoobaanta ardayga iyo qoyska ee Dugsiga Degmada Minnetonka
Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayda
Adeegyada Taageerada Ardayga /
Kheyraadka wanaagga /